ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - ခါချနေရတယ် [2015 Album] 192Kbps! - Mg Shan Lay
Home ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း 192 Kbps! Album Bunny Phyoe High Quality Rဇာနည် Snare ရဲရင့်အောင် လွှမ်းပိုင် ဟန်ထွန်း ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း - ခါချနေရတယ် [2015 Album] 192Kbps!
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း - ခါချနေရတယ် [2015 Album] 192Kbps!
10:52:00 AM ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, 192 Kbps!, Album, Bunny Phyoe, High Quality, Rဇာနည်, Snare, ရဲရင့်အောင်, လွှမ်းပိုင်, ဟန်ထွန်း,
1. ခါချနေရတယ် [Feat.Snare]
2. ငါပဲသိတဲ့ အချစ် [Feat.Nine One]
3. ၀န်ခံတယ်ချစ်နေပြီ [Feat.ရဲရင့်အောင်]
4. ကြယ်တွေကြွေတိုင်း [Rဇာနည်]
5. Remote Controll [Feat.စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်]
6. ငါတို့အတွဲ [Feat.Bunny Phyoe]
7. လေလှိုင်းထဲက လွင့်လာတဲ့ သီချင်း [Feat.ဖိုးကာ]
8. ထာဝရအိပ်မက် [Feat.ဟဲလေး]
9. အသက်ရှုမှားအောင် [Feat.ဆိုတေး]
10. ဒီည [Feat.Ar-T]
11. အာဒမ်မဟုတ်တဲ့နင် . . . ဧ၀မဟုတ်တဲ့ငါ [Feat.လွှမ်းပိုင်]
12. အချစ်မြို့ [Feat.ဇော်ပိုင်]
13. သီးသန့်ကမ္ဘာ [Feat.ဟန်ထွန်း]
14. ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက် [Feat.သားသား]
15. ရွှေလက်တွဲ [Feat.နေတိုး]
Tags # ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း # 192 Kbps! # Album # Bunny Phyoe # High Quality # Rဇာနည် # Snare # ရဲရင့်အောင် # လွှမ်းပိုင် # ဟန်ထွန်း
Labels: ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း, 192 Kbps!, Album, Bunny Phyoe, High Quality, Rဇာနည်, Snare, ရဲရင့်အောင်, လွှမ်းပိုင်, ဟန်ထွန်း